Gumiguru | MINYENGETERO MARI
China, Gunyana 16, 2021
musha Tags Gumiguru
Kunamata Points Kwemwedzi weEmber
admin vashandi - September 11, 2021 0
Nhasi tichave tichinangana nemunamato mapoinzi em ember mwedzi. Munzvimbo zhinji dzenyika, iyo ember mwedzi inozivikanwa ne ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 31st Gumiguru 2018
Mufundisi Ikechukwu Chinedum - November 1, 2018 0
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 24: 1-27. Verenga uye uropafadzwe. 2 Makoronike 24: 1-27: 1 Joashi aive makore manomwe ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 30th Gumiguru 2018
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kwanhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 22: 10-12 uye 2 makoronike 23: 1-21. Verenga uye uropafadzwe. 2 Makoronike 22: 10-12: 10 ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 29th Gumiguru 2018.
Mufundisi Ikechukwu Chinedum - October 23, 2018 0
Kuverenga kwedu bhaibheri kwemazuva ese kuri kutora kubva mubhuku ra2 Makoronike 21: 1-20 uye 2 Makoronike 22: 1-9. Kuverenga uye kuropafadzwa. Kuverenga Bhaibheri Mazuva Ose. 2 ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 28 Gumiguru 2018
Kuverenga kwedu zuva nezuva bhaibheri kuri kutora kubva mubhuku ra2Makoronike 19: 1-11 uye 2 Makoronike 20: 1-37. Kuverenga uye kuropafadzwa. Kuverenga Bhaibheri Mazuva Ose. 2 Makoronike ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 27th Gumiguru 2018
Kuverenga kwedu bhaibheri kwezuva nezuva kunotorwa kubva kuna 2 Makoronike 17: 1-19, 2 Makoronike 18: 1-34. Verenga uye uropafadzwe. Kuverenga bhaibheri kwezuva nezuva 2 Makoronike 17: 1-19: 1 Uye Jehoshafati wake ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva 26 Gumiguru 2018
Kuverenga kwedu bhaibheri kwezuva nezuva nhasi kunobva mubhuku ra2 makoronike 15: 1-19, uye 2 makoronike 16: 1-14. Verenga uye uropafadzwe. Kuverenga Bhaibheri kwanhasi. 2 Makoronike ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 25th Gumiguru 2018.
Kuverenga kwedu bhaibheri kwezuva nezuva nhasi kubva mubhuku 2 Makoronike 13: 1-22, uye 2 Makoronike 14: 1-15. Verenga uye ukomborere. Kuverenga bhaibheri kwezuva nezuva nhasi. 2 Makoronike 13: 1-22: 1 Zvino ...
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 24th Gumiguru 2018
Kuverenga kwedu bhaibheri kwezuva nezuva kunobva mubhuku ra2 Makoronike 11: 1-23, uye 2 Makoronike 12: 1-16. Verenga uye uropafadzwe. Kuverenga bhaibheri kwezuva nezuva. 2 Makoronike 11: 1-23: 1 ...
Kuverenga Bhaibheri Kwemazuva 23 2018 Gumiguru XNUMX.
Kuverenga kwedu bhaibheri kwezuva nezuva nhasi kunobva mubhuku ra2 Makoronike 9: 1-31 uye 2 Makoronike 10: 1-19. Verenga uye uropafadzwe. Kuverenga bhaibheri kwezuva nezuva nhasi 2 ...
12Page 1 pamusoro 2
10 Inesimba Yemunamato Points Yekudzivirira Uchishandisa Pisarema
30 Ndima dzeBhaibheri dzekudzivirira